भारतले सुरु गर्यो पाकिस्तानमा बम हमला ! खसाल्यो ठुलो बम - PUBLICAAWAJ
भारतले सुरु गर्यो पाकिस्तानमा बम हमला ! खसाल्यो ठुलो बम
प्रकाशित : मङ्गलबार, फागुन १४, २०७५११:३५
१४ फागुन , भारतले पाकिस्तान भूमिमा १ हजार किलोग्रामको बम खसालेको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यम एसियन न्युज इन्टरनेशनलका अनुसार पाकिस्तानको अधिनमा रहेको कस्मिरको ‘लाइन अफ कन्ट्रोल’ भन्दा पर जहाजले बम खसालेको छ।
पाकिस्तानी अधिकारीहरूका अनुसार लाइन अफ कन्ट्रोल’ उल्लंघन गरी मुजाफारवादको पाकिस्तानी आकाशमा बम पड्किदा त्यहाँ रहेको आतंककारी समूह जैश-ए-मोहम्मदको अखडा ध्वस्त भएको बताएका छन्। भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार बम खसालेर वायु सेनाका एक दर्जन मिराज २००० जहाज विनाक्षति भारत फर्किएको जनाएका छन्।
ट्वीटरमा भारतीय कंग्रसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले भने लेखेका छन्- म कारबाहीमा संलग्न भारतीय एयरफोर्सका पाइलटहरू लाई सलाम गर्छु। पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता जनरल आसिफ गफुरले ट्वीट गर्दै फर्किने बेलामा भारतीय जहाजले हतारमा विस्फोटक पदार्थ खसालेको बताएका , भारतीय विदेश मन्त्रालयले यसबारेमा आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
इस्लामाबाद, १३ फागुन (सिन्ह्वा) – पाकिस्तानको उत्तरपश्चिमी प्रान्त बलुचिस्तानमा आइतबार साँझ भएको एक बम विस्फोटमा परी कम्तीमा एक व्यक्तिको मृत्यु हुनुको साथै अन्य १३ जना घाइते भएका छन् ।
स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार बलुचिस्तान प्रान्तको नसिराबाद जिल्लाको प्रमुख कार्यालय रहेको डेरा मुराद जमाली इलाकमा सो बम विस्फोट भएको छ ।
उद्धारकर्ता र प्रहरी टोलीले बम विस्फोटमा परी घाइते भएका व्यक्तिहरुलाई नसिराबाद जिल्लामा रहेको अस्पतालमा उपचारार्थ भर्ना गरिएको छ ।
छदेखि आठ किलो विस्फोटक पदार्थले भरिएको सो बम दुर नियन्त्रित यन्त्रद्वारा विस्फोट गराइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
घाइतेमध्ये तीन जनाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
बम विस्फोट भएको इलाकामा अनुसन्धान शुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । यस बम विस्फोटको हालसम्म कुनै पनि समूहले जिम्मेवारी लिएको छैन ।